Ukukhetha ulimi lwakho lokuqala lohlelo | KusukaLinux | I-ChrisADR | Kusuka kuLinux
Impela lo ngeminye yemibuzo eza ebhokisini lami lokungenayo kakhulu lapho kukhulunywa ngohlelo. Uma sizoqala uchungechunge lwama-athikili azokuvumela ukuthi ufunde ukuthi ungahlela kanjani futhi ubuyisele ulwazi lwamahhala ngendlela yokunikela kwimiphakathi yesoftware / yemithombo evulekile emhlabeni wonke, kuyadingeka ukuphendula lo mbuzo oyisisekelo uma umbuzo onzima. Yiluphi ulimi lokuhlela okufanele ngilufunde?
2 Izilimi zomshini (ileveli ephansi)
3 Izilimi ezisezingeni eliphakeme
3.1 Izilimi ezihlanganisiwe
3.2 Izilimi ezihunyushiwe
6 Yikuphi okumele ukhethe?
6.1 Funda ngento ethokozisayo
6.2 Qala iphrojekthi
Ukuze siqale ukuqonda nokukhetha ulimi lohlelo, kufanele siqale sazi okuncane ngomlando wabo, ukusetshenziswa kwabo nemisebenzi yabo, nokuthi bazixazulula kanjani izidingo ezahlukahlukene ngokuhamba kwesikhathi.
Izilimi zomshini (ileveli ephansi)
Ngokuvamile kwaziwa njenge Assembly, izilimi ezihlelayo esingazichaza njengezilimi zolimi olujwayelekile ... Lokhu kuzwakala kuyinkimbinkimbi kepha ngizoba yisibonelo ... Siyazi ukuthi ulimi lwekhompyutha jikelele ugesi, lokhu kusho ukuthi ekugcineni lokho okufundwa yikhompyutha 0sy 1yebo, ake sikubize lokhu eikhompyutha english. Kulesi sibonelo, iSpanish ngumthetho oyisisekelo, kepha njengoba sazi kahle, iSpanish esikhulunywa yiLatinos asifani naleso esikhulunywa eSpain, futhi noma kunjalo, iSpanish yasePeru ayifani neSpanish yase-Argentina. Ngokusobala sonke sinamagama acishe afane (0sy 1s), kepha ukusetshenziswa nencazelo kungahluka ngokuya ngomongo.
Lokhu kwenzeka ezingeni leprosesa. Lapho sikhuluma ngayo izakhiwo zekhompyutha, (amd64, intel, arm, ...) sibhekisa kulolo limi lwalokho iSpanish yekhompyutha. Lokhu kungenxa yokuthi izinkampani ezahlukahlukene ziqonda ukuhleleka nencazelo ngendlela yazo, ngakho-ke ezinye ziyahlukahluka emininingwaneni efana nokuhamba kwamanje, noma indlela izinto ezizogcinwa ngayo. 0sy 1s.
Lezi zilimi ezihlelayo zishesha ngokwedlulele, ngoba zisebenza ezingeni eliphansi kakhulu lohlelo, kepha zincike kakhulu ekwakhiweni kwezakhiwo futhi ngokuqinisekile ziyinkimbinkimbi yokufunda kunezinye. Lokhu kuvame ukudinga isisekelo semibono ebanzi ukuze kuguqulwe idatha futhi kusebenze izinto eziwusizo kuyo. Kubathandi bemidlalo yevidiyo, isibonelo kungaba ngamakhonsoli we-SEGA, asebenzise i-Assembly ukuhlela imidlalo yabo. Ngokusobala ngaleso sikhathi inani lememori lalilincane uma liqhathaniswa nanamuhla, futhi kwakudingeka ukwazi kahle ulimi olungashesha futhi lukhiqize izinhlelo ezilula.
Izilimi ezisezingeni eliphakeme
Leli qembu elikhulu licabanga ngalezo zilimi ezalandela Assembly. Isidingo sokuthola ikhodi ephathekayo savusa iqembu lezilimi ezibiziwe kuhlanganiswe. Phakathi kwalaba, abokuqala ukusizakala bekuyi-C, ebinokubaluleka kokuhlela ezingeni lohlelo olusebenzayo kusukela ngama-70s.
Ake sibheke isibonelo esisebenzayo salokho engikuphawulayo. Ake sibheke uhlelo olulula kakhulu lwe-C oluphrinta umugqa owodwa wekhodi.
Ngemuva kokuyihlanganisa sinokulandelayo:
Idizayini uqobo: UChristopher Díaz Riveros
Kepha manje ake sibone ukuthi kuzofanele sibhale ini ukuphindaphinda umphumela ofanayo kwikhodi yoMhlangano:
Lokhu ukuhunyushwa kwemigqa yethu emithathu yekhodi kusuka simple.c, ifayela simple.s idalwe ngomyalo gcc -S simple.c futhi yilokho iprosesa lethu elizoqonda ngolimi lwesigodi Assembly. Ngokusobala ukuze kudale okwenzekayo okuqukethe 0sy 1Ifayela lidinga ukucutshungulwa simple.s bese uyixhuma nemitapo yolwazi eyabiwe yohlelo lwethu. Lokhu kwenziwa kusetshenziswa ifayili le- ukuhlanganisa (as) futhi a isixhumi (ld).
Izilimi ezihlanganisiwe zinikeza inzuzo enkulu kunalezo ezisezingeni eliphansi, kunjalo okuphathekayo. Ukuthwala kuletha ikhodi engenziwa kuma-processor ahlukile ngaphandle kwesidingo sokwenza ikhodi ethile yokwakhiwa ngakunye. Enye inzuzo esobala ukuthi kulula ukuyisebenzisa lapho ifunda futhi ibhala ikhodi. Phakathi kokubi kwayo okuyinhloko sinobunzima obuphakeme, ngoba uma kuqhathaniswa nezinhlobo ezilandelayo zezilimi esizobona, inkululeko enikezwa nguC ingaba yingozi uma ungazi ukulawula, ngokuqinisekile kufana nokunikela ngesibhamu , kungenzeka ukuthi uma kunesipiliyoni umuntu agcine esedubula unyawo lwakhe ezama ukuhlanza isibhamu.
Phakathi kwezinto ezivelele kunazo zonke singabona ukuthi umugqa wokuqala uphethe ukubiza utolika (uhlelo oluzosebenza ngohlelo lwethu) futhi ikhodi elandelayo ilula "elula" kunenguqulo yayo ku-C, ngoba wonke umsebenzi osindayo kwenziwa kutolika.
Izilimi ezihumushiwe zinikeza unjiniyela isendlalelo esikhulu sokuphepha, ngoba banezilawuli ezinzima kakhulu (QAPHELA ukuthi abaphelele, ngoba ngisho nabangcono kakhulu bangenza amaphutha) futhi asisabhekene nengozi yokudubula isikhali singanakile, kusukela ekuzameni kokuqala, utolika ubephakamisa isexwayiso futhi ukukhishwa kuzokhanselwa. Okubi kakhulu kuyabonakala lapho kwenziwa lolu hlelo, ngoba luhamba kancane kunomlingani walo kanambambili, lokhu kungenxa yenani elikhulu lokucutshungulwa ukuze likwazi ukuqinisekisa ukuthi ikhodi iyasebenza. Uma uhlelo lungadingi isikhathi esibekiwe esifushane ngokwedlulele, umehluko ungabonakala, kepha uma sikhuluma ngezinkulungwane noma ngezigidi zedatha ngomzuzwana, umehluko ubonakala ngokugqamile ngezilimi ezihlanganisiwe.
Lesi isici sezilimi ezihlelayo, lokhu kungaba ngokuqinile o ngobuthakathaka kuthayishiwe. Ngizoshiya lesi sihloko ngithumele okunye okuthunyelwe, ngoba kunesidingo futhi kunelukuluku ukuqonda ukuthi imemori igcinwa kanjani ohlelweni, kepha manje kudingeka senze umehluko kuphela: Izilimi ezithayiphiwe ngokuqinile yilezo ezidinga ukwazi uhlobo lwedatha oluzayo ukusetshenzwa ngokuguquguqukayo noma okuqhubekayo, ngenkathi i- ngobuthakathaka Izinhlobo zingenza ukuguqulwa kanjalo okusobala futhi yonke into izoncika esigabeni sokuguqulwa okulandelwa ulimi. (Uma kungaqondakali manje, akunankinga, sizoyishiya ngokuhamba kwesikhathi)
Njengakho konke emhlabeni we-GNU / Linux, izilimi ezihlelayo zisuselwa kuma-paradigms, futhi imiphakathi yenziwa ibazungezile. Isibonelo sinefayela le- Isisekelo sePython o Ruby o PHP o Bash (lapho-ke kungumphakathi we-GNU). Engifuna ukufika kukho nalokhu ukuthi angikwazi ukuveza inani elikhulu lobuhle nobubi umuntu ngamunye anakho, kepha ngiyakutshela ukuthi lapho kukhona khona ulimi lwamahhala lohlelo, kunomphakathi lapho ungafunda futhi ubambe iqhaza khona. Kuyafaneleka ukusho ukuthi abaningi uma kungenjalo bonke abahumushi bolimi babhalwe ngo-C, noma okunye okususelwe eduze, futhi ukukhula kwabo kuvame ukwenziwa yiqembu elincane lomphakathi, eliphethe ukuthatha izinqumo ezizothinta bonke abasebenzisi bolimi. Izikhungo zingasungulwa ngisho nokuqinisekisa ukukhula kolimi ngendlela efanele, njengoba kunjalo ngoC.
Sesikhulume ngokwanele ngezilimi futhi angikayiphenduli into ebaluleke kakhulu. Kepha ngithemba ukuthi ngemuva kokubuyekeza le ndatshana encane akudingekile ukuthi ngikutshele ukuthi yiluphi ulimi okufanele ulukhethe, ngoba ngalolu lwazi uyakwazi ngokuphelele ukufuna okudala ukwazi. Ngokusobala uma ufuna ukufunda ukuhlela ngolimi Assembly kuzothatha isikhathi eside ngaphambi kokuthi ube nokuthile okusebenzayo, isikhathi sizoncishiswa kakhulu uma ukhetha ulimi oluhlanganisiwe, lapho ngaphezu kokuthwala kuzinhlelo ze- * NIX, uzokwazi ukufunda imininingwane maqondana nokusebenza kwe uhlelo olufanayo, njengoba ukuxhumana no-C noma okuphuma kukho kukwenza ngandlela thile ufunde ukuthi uhlelo olusebenzayo lusebenza kanjani ngendlela ejwayelekile. Ekugcineni, uma ufuna ukufunda okuthile okulula futhi okukuvumela ukuthi wenze okuningi ngaphandle kwesidingo sokuqonda okuningi, izilimi ezihumushiwe ziyindlela emnandi yokufunda nokuthuthukisa amakhono wokuhlela.
Funda ngento ethokozisayo
Ngalokhu angisho ukuthi udala umhlanganisi olandelayo, noma ngisho nolimi olulandelayo lohlelo, iphrojekthi kungaba ukulungisa isiphazamisi esincane kuhlelo lwakho oluthandayo, mhlawumbe nokusiza ukuthuthukisa imibhalo. Kungani imibhalo? ngoba ayikho indlela engcono yokufunda ukuthi isoftware isebenza kanjani kunokufunda nokusiza ukubhala imibhalo yayo, ngoba ngemuva kwekhodi yomthombo, ingumthombo omkhulu wolwazi ozowuthola ngalolu hlelo. Komunye umzuzu sizobona ukuthi siyifunda kanjani ikhodi yephrojekthi futhi siqonde imisebenzi namanani abawatholayo.
Ngiyabonga kakhulu ngokufika lapha futhi njengenjwayelo, ukuphawula kwakho kungisiza ukukhiqiza okuqukethwe okungcono nokwazi ukuthi ngigxile kuphi, Sanibonani.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukuhlela » Ukukhetha ulimi lwakho lokuqala lohlelo
Njengenjwayelo u-10 !!!!!! Ngiyabonga ngemibhalo yenu. Sanibonani nokuningi okuzayo !!!!
Ngiyabonga kakhulu 🙂 ungikhuthaza ukuthi ngiqhubeke nokubhala. Jabulela
Ngicabanga ukuthi kuyiphutha ukubuza umbuzo othi "yiluphi ulimi okufanele ulukhethe?" Ngingomunye walabo abacabanga ukuthi ulimi yilona oluncane kakhulu, okubalulekile ukufunda izisekelo zohlelo futhi "ucabange ngokubalwa." Thatha isinqumo nge-syntax, ukuthayipha kwayo, uma isekela i-OOP, ukusetshenziswa kwayo, njll. Ngicabanga ukuthi yinto ezoza ngokwemvelo esifundweni futhi ngemuva kwakho konke, wonke umakhi wezinhlelo wazi ngaphezu kwezilimi ezi-1, 2 nezingu-3 ... futhi ngenxa yemiqondo yokuhlela (hhayi i-syntax) anayo, uyakwazi ukuyihlela ngolimi angenalo ulwazi ngalo okwamanje.
Kodwa-ke, kwabasunguliwe, ngicabanga ukuthi ulimi oluhle lungaba yiPython ngokulula kwayo, kepha ngaphezu kwakho konke, hamba kancane, ufunde ama-algorithms futhi wazi ukuthi izinto zisebenza kanjani "ngaphakathi".
Sawubona Rubén, ngiyabonga ngokwabelana
Kunokuthile engikufundile ngokuhamba kwesikhathi emhlabeni wezinhlelo, futhi lokho ukuthi "ohlanganisa okuningi akakhanyi" futhi ngalesi sisho esaziwayo ngiqonde ukuthi izikhathi eziningi, futhi ikakhulukazi abanentshiseko enkulu, banquma zama konke, futhi ube nokushintshana okusheshayo maqondana nokuthi ufunda kanjani ukufaka ikhodi. Ngiyakholelwa, futhi kungumbono wami, ukuthi umqambi omuhle kufanele azi futhi alwazi kahle ulimi oluhlanganayo nolimi lokuhumusha, ngaphezu kokuba nombono wolimi oluthile loMhlangano.
Isizathu yilokhu okulandelayo, ukwenziwa kwe-prototyping kufanele ngaso sonke isikhathi kube yinto elula futhi esheshayo, elula ukuyikhipha futhi ekhombisa imiphumela, kepha uma inganele, kufanele kube khona "uhlelo B" lokusebenzisa lapho umhumushi esefikile umkhawulo wayo.
Ukwazi ulimi lwe-Assembly akugcini nje ngokunikeza ukuzethemba kepha futhi kukufundisa ukuthi ucabange "ngokuhlanganisa", kepha kusobala ukuthi le ngxenye iyinkimbinkimbi kunazo zonke, futhi ngokuqinisekile kuyinto okungeyona bonke abahleli bezinhlelo abeza kuyo.
Kepha buyela esihlokweni, ngoba umqondo oyinhloko engicabanga ukuthi, "khetha ulimi bese wenza LOT", ngoba empeleni ukuphela kwendlela yokwenza okuhle ezinhlelweni ukufunda nokubhala ikhodi, futhi lokhu yinto engiyifundile umphakathi we-kernel Uma ugcina i-syntax efanayo isikhathi eside, uyeka ukubona ifomu bese uqala ukukhathazeka nge-BACKGROUND. Umqondo wokukhetha ulimi noma i-syntax kwasekuqaleni ukuthi umuntu uyakwazi ukujwayela ukufunda nokubhala kwayo ngendlela yokuthi angaqala ukufunda INCAZELO yohlelo esikhundleni se-syntax yohlelo.
Lesi yisona sizathu esikhulu salokhu okuthunyelwe, ukuthi ngamunye akhethe ulimi lwakhe ukuze kokulandelayo sichaze imiqondo, mhlawumbe ngalokhu ukungabaza kuyacaciswa 🙂
ngiyabonga ngeposi bekukuhle.
Sawubona Deibis, ngiyabonga ngokwabelana 🙂 Sanibonani
Iseluleko sami: yini enye ngaphandle kwe-PHP. Eminyakeni engamashumi amabili edlule i-PHP yenza umqondo othile ngokuba khona kwayo ngenxa yezinga eliphakeme lobunzima obeluhlela iWebhu ngolunye ulimi kusetshenziswa i-CGI. Kepha namuhla kunezinhlobonhlobo eziningi ze-Frameworks ezokwenza ukuthuthukiswa kweWebhu kujabulise kakhulu ngezilimi ezinamandla, njenge-Django yePython, i-Spring yeJava noma amaRails eRuby. Yize i-PHP njengamanje ivela kuwo wonke amashadi wokuthandwa kwezilimi, ngombono wami i-PHP izolahlekelwa ukusebenza kwayo ngokuhamba kwesikhathi.
Ngeluleka ngokuqinile ukuqala nge-C \_ C ++ ukuqonda ubuqiniso bohlelo, yize ijika lokufunda lisezingeni eliphezulu.
Sawubona Jorge, ngiyabonga ngokwabelana, ngikhumbula nje iLaravel, okuwuhlaka oluqinile personally Mina angikaze ngiyithande iSpring noma iJava yokuthuthuka kwewebhu, ngikuthola kunzima, kepha ngicabanga ukuthi yingxenye yesikhathi abebekuso imakethe, ngaleso sikhathi babengamaphayona futhi ngokuqinisekile ezinye izindlela zesimanje (i-Js, i-Python ne-Ruby) zikwazile ukwenza ngcono indlela yokwethula ikhodi efundekayo futhi eguquguqukayo ngaphandle komsebenzi omningi.
Ngithambekele nakubantu abafunda i-C / C ++ ngesikhathi esithile ezimpilweni zabo, ngaqala ngeJava, kepha ngicabanga ukuthi lokho ubuhle bohlelo, ungaqala nganoma yini oyifunayo, inqobo nje uma ungaguquguquki yiba lusizo 🙂 Jabula
Angikwazi ukuphikisana nawe futhi. Ngiqale eminyakeni eminingi edlule nge-C ne-VB, ukuze ngigxile kamuva ku-PHP ne-JS (njengoba ngigxile ekuthuthukisweni kwewebhu) kwathi ngokuhamba kwesikhathi ngisafunda ngafunda i-C / C ++ neJava ikakhulu.
I-PHP inezinzuzo eziningi ebengingazibhalanga kulo mlayezo. I-PHP7 iyashesha (iyashesha kunePython ... ngaphandle kokusebenzisa i-hhvm, izinqolobane ezihlukile, izinhlaka ezinjengePhalcon noma i-bytecode esimweni sePython), inenqwaba yemitapo yolwazi nezinhlaka, inenani elikhulu kakhulu lemisebenzi esetshenziselwe ukusetshenziswa ngqo nganoma yisiphi isikhathi, i-syntax yayo efana kakhulu ne-C yenza kube lula kakhulu ukuthuthela kwezinye izilimi.
Ama-30% amawebhusayithi emhlabeni wonke enziwe ngeWordPress (PHP) futhi lokho kubonakala kungashintshi, iWikipedia iyayisebenzisa, iFacebook (ene-hhvm) nenani elikhulu lamasayithi, esewonke, angama-80%.
Ngiyakukhumbuza ukuthi uRuby on Rails njengoDjango uneminyaka eyi-12! Yisiphi isilinganiso abasitholile ngalesi sikhathi? Futhi-ke, sikhuluma ngezinhlaka ezi-2 ezinamandla okuzimela futhi alukho uhlobo lokuqhekeka. Yiziphi ezinye izindlela ezibucayi enginazo? Ukusho ukuthi i-PHP izolahlekelwa ukufaneleka akunangqondo kangako.
I-Ruby ilulimi oluthakazelisa kakhulu, kepha iphula kakhulu ngamaphethini asunguliwe engikuthola kunzima ukukholelwa ukuthi yaduma kakhulu kune-PHP. Vele, uRuby ngicabanga ukuthi yilona limi olubi kakhulu ukuqala uhlelo lwazo zonke.
Ngiyakuqonda ukuthi ungitshela ukuthi iPython ingaba mnandi ohlelweni, noma uRuby ngokungapheleli kwakhe kwezici ... kepha Intwasahlobo eneJava? Ngempela? IJava ingaba izinto eziningi ... kepha ijabulise kakhulu kunePython ne-PHP?
Konke kuhle kakhulu ukuqala ngePython, kepha njengoba unamathela kuPython wedwa, ubeka engcupheni yokuthi izinkampani eziningi zizokholwa ukuthi izinga lakho lohlelo alukho "olujulile" (noma ngabe umuhle kakhulu ePython). Lokhu kungenxa yokuthi uncintisana nezinye izilimi "eziningi" njenge-C ++ noma iJava. Ungahlela ku-Python ngaphandle kokwazi umehluko ukuthi isihogo siyisikhombi, imisebenzi ye-bitwise, ukuthi umqoqi kadoti usebenza kanjani kanye ne-etcetera ende.
IPython mhlawumbe ifana ncamashi ne- "classical programming" ekhona futhi engabonakala "njengolimi lwezingane" (thola isingathekiso), futhi lokho kuyinzuzo nokubi.
"IPython mhlawumbe icishe ifane 'nezinhlelo zakudala' ezikhona futhi ezingabonakala 'njengolimi lwezingane' (thola isingathekiso), futhi lokho kuyinzuzo nokubi." I-LOL, lokhu kungenye yezinto ezimnandi kakhulu engizibonile ezishiwo ngePython. Wake wayifunda ngempela iPython?
Sekuyisikhathi esingakanani emhlabeni jikelele ngaphandle kwe-PHP?
Umngani we-PHP wazalwa efile. I-PHP (\_ d +) inomthwalo omningi nayo ngenxa yokwakheka kokuqala okubi kakhulu futhi ukuze igcine umphakathi womsebenzisi iyaqhubeka nokudonsa wonke lawo maphutha wokuklama okuqala ngokuphelele. I-PHP yazalwa ngaphandle kokuhleleka, inokusebenza okuningi kwesitayela se-C (okuyindlela, angazi ukuthi uvelaphi lapho ngoba i-syntax yayo ifana no-C ingahanjiswa kalula kwezinye izilimi). Ulimi olusezingeni eliphakeme, njengoba i-PHP kufanele iziphathe, linezinto ezimbi njengale ndlela yemisebenzi efakwe ohlwini lwayo olusemthethweni http://php.net/manual/en/indexes.functions.phpLokhu kungenxa yokuthi yazalwa ngaphandle kokuhleleka, ngakho-ke yonke into ingcolile ixubekile futhi ingenazikhala zamagama.
Le yingcezu yekhodi ye-PHP:
ukusakaza_context_set_params ($ ctx, $ params);
ngasikhathi esithile unganquma ukuthi konke lokhu kusebenza 'kokusakaza' kwangeniswa kuphi? Cha, ungasho ukuthi yimisebenzi yokwakha, kepha-ke yonke imvelo yimisebenzi yokwakha? Futhi-ke, kunodoti omningi kwikhodi ye-PHP, ukuthi uma ungakwazi ukuqonda ubunzima nokungenamsebenzi komklamo omubi kangaka, ungixolele kepha kusenokuningi komhlaba ongakubona.
I-Wordpress yisisombululo esihle kakhulu sesoftware, kepha lokhu akusho ukuthi inesisekelo esihle sobuchwepheshe. Ungakhanda ngetshe uphinde ukhiphe izinzipho ngamazinyo akho, futhi usengakwazi ukwenza umsebenzi omuhle kakhulu wokubaza, kepha-ke, ngomsebenzi omningi kakhulu kunomunye umbazi osebenzisa isando esihle.
Ngakolunye uhlangothi: "yiba wuhlelo kumahora angama-20 ngePython bese usebenza kuwo", angikaze ngibubone ubuwula obunjalo. Ungakha iwebhusayithi ku-PHP emahoreni angama-20 futhi ngaphandle kokwazi ukuthi i-Web programming isebenza kanjani, noma uhlelo uqobo lwayo. Eqinisweni, yingakho i-PHP ithandwa kakhulu, ngoba ama-newbies angena kuleli zwe abona i-PHP njengephuzu lokuthuthuka okusheshayo (yingakho ikhodi ye-PHP eningi kakhulu imunca kanzima).
Mayelana nokushiyeka kukaPython, ukuphela kwempumelelo yayo bekungukusebenza ngezikhombisi, kepha noma kunjalo, iPython ulimi olusezingeni eliphakeme (njengeJava) futhi alisebenzisi lokhu ezingeni le-syntax; kodwa ukusebenza kancane, kubi?, usho lokhu x << y, x >> y: https://wiki.python.org/moin/BitwiseOperators. Ngiyiqonde kahle into yokuqoqa udoti kakhulu: https://docs.python.org/3/library/gc.html.
-PHP inomklamo wohlelo oluhle kakhulu oluqondiswe entweni (OOP).
-Awukwazi ukulayisha ngokweqile opharetha okwamanje.
-Ukumangala, function overloading ku-PHP akuyona into oyilindele ngokwemvelo kulo mqondo.
… .. futhi ngavele ngabhoreka hehe.
Ngafaka ama-parentheses "aqonde isingathekiso" (ngokuqhathanisa iPython neC ++ / Java endaweni efanayo yokusebenza), kusobala ukuthi ubungaqondi. Ngingakutshela ukuthi umdidiyeli we-C ++ angafunda iPython ngendlela eshesha kakhulu kunokuba umqambi wePython angafunda i-C ++, njengoba kungamangazi ukuthi umholo ojwayelekile wohlelo lwe-C / C ++ ungaphezulu kwe IPython eyodwa.
Ngingakucacisela ngezinye izibonelo, noma ngomdwebo! kepha kubukeka sengathi ugxila kuphela ekunqandeni imibhalo nokuhlekisa ngengikubekayo.
Akunasikhathi lapho ngike ngasho khona ukuthi i-PHP yilona limi oluhamba phambili emhlabeni noma ukuthi lwakhiwe ngendlela eyisibonelo, angazi ukuthi ukuthathaphi lokho. Ngicabanga ukuthi ngaphambi kokwahlulela ulwazi lwabanye kufanele uthuthukise ukuqonda kwakho kokufunda. Okuyiqiniso (futhi ngishilo emyalezweni wami) ukuthi ukuthuthuka nakho kushesha kakhulu, ngaphezu kohlelo lonke lwe-ecosystem yezinhlaka, imitapo yolwazi kanye nezinsiza ongazithola.
Futhi, hlobo luni lokuqhathanisa esikwenzayo? I-Python njengolimi olunezinjongo eziningi noma lewebhu? Uma kunjalo, kungani siyiqhathanisa ne-PHP? I-PHP inenkambu ethile, futhi ikuleyo nkambu lapho iPython (enesabelo esingu-0.2%, esingashintshi kulo nyaka wonke) ibambeka eceleni kwe-PHP.
Manje ake sibheke izitayela ze-PHP; kusuka kuma-82,4% ngoJanuwari 2017 kuya ku-83.1% ngoJanuwari 2018: https://w3techs.com/technologies/history_overview/programming_language
Ngabe iPython izobeka phansi i-PHP? Ngawuphi unyaka? eminyakeni miphi emihlanu? iminyaka eyishumi?
IPython izokwazi ukusetshenziswa kweminye imisebenzi eminingi, futhi isetshenziswe kabanzi kune-PHP, kepha iPython njengolimi lokuthuthukisa iwebhu sekuminyaka elula ukuthi ibe efanelekile, i-0.2% imile ngokumelene ne-83.1% (ngokunyuka kulo nyaka) .
Uthatha izinto kalula uma uthi angihambi ngaphesheya kwe-PHP, ukhomba ukuthi ngazi i-PHP kuphela, lapho angikaze ngihlelelwe i-PHP isikhathi eside haha. Njengamanje, ngenxa yezizathu zomsebenzi, ngihlela kakhulu eJava.
Futhi angishongo ukuthi ngokuhlela ku-Python awunalo ulwazi nge-bitwise, umqoqi kadoti noma isikhombisi. Esikhundleni salokho, ungahlela kuPython ngaphandle kokwazi nokuthi yini lokhu. Kodwa-ke, ngiyakungabaza kakhulu ukuthi kungaba njalo ngohlelo lwe-C ++. Futhi kusobala ukuthi ngenza ukuqhathanisa lapho i-Python ingena kuleyo nkambu "yolimi olunezinhloso eziningi", hhayi yohlelo lwewebhu.
Yiba wuhlelo emahoreni angama-20 kumane nje kuyihlaya, ihaba. Kodwa-ke, ngingakubeka lapha izixhumanisi ezahlukahlukene mayelana namapulatifomu wemfundo eku-inthanethi nezifundo ezithembisa izinto ezifanayo. Ungangisoli, usole emakethe yomsebenzi ecabanga ukuthi ukuba "uchwepheshe wohlelo" kuyindaba yokuthatha isifundo samahora angama-20. Futhi iPython ingenye yezilimi ezifake imfashini futhi, nejika lokufunda elisheshayo ... elimhlophe nasebhodleleni.
Ngiyagcizelela, usekela umyalezo wakho ngokusho ukuthi i-PHP imbi kangakanani (okuyingxenye ethile, ngiyavuma). Kubukeka kulungile kimi, ngaphandle kokuthi umyalezo wami awukho mayelana nalokho, kepha kungani i-PHP isazoqhubeka nokusetshenziswa futhi ngeke inyamalale kusasa njengoba ucabanga.
C -> Go -> (Lisp | Haskell | Java | noma yini)
Muva nje umfundi ungithumelele isincomo ngencwadi ethi Go ku-imeyili yami, ngokuqinisekile ulimi oluzocatshangelwa ngokuzayo futhi okungenzeka ukuthi kuzoba nokuthunyelwe lapha graphics Ihluzo eziningi ongabelana ngazo
Hhayi ... futhi yini engiyihlelayo? Kungani kufanele ufunde ulimi oluhlelayo namuhla ngabahleli bohlelo abahle nabanolwazi esivele sikhona? Yiziphi izinkinga engingazixazulula ezinye ezingakaxazululwa ngendlela ephumelela kakhudlwana?… Ngamafuphi: Kwenziwa kanjani ukuba ngumqambi wohlelo namuhla? Ngingabambisana kanjani nabanye ngaphandle kokukhahlelwa noma ukukhishwa inyumbazane ngenxa yokuntula kwami ​​ulwazi nesipiliyoni?
Sawubona mvr1981, imibuzo ethokozisayo 🙂 sizoyibuyisa kusuka kowokugcina kuye kowokuqala.
Ngingasebenzisana kanjani nabanye ngaphandle kokukhahlelwa noma ukukhishwa inyumbazane ngenxa yokuntula kwami ​​ulwazi nesipiliyoni?
Uma ungafuni ukukhahlelwa, isinyathelo sokuqala ukufunda inqubo, awukwazi ukucabanga inani labantu abeza kumaphrojekthi bafuna ukwenza izinto ngendlela yabo kuphela, befuna umphakathi uvumelane nezifiso zabo. Impela kufana nokuthi ngiza endlini yakho ngenza udlame nokungahloniphi umndeni wakho (yileyondlela ozizwa ngayo kaningi). Uma ufuna ukuvimbela lokhu ukuthi kungenzeki, naka kakhulu izinkombandlela zokunikela, izindlela zokwenza lokho, futhi ungathumeli okuthile okungaphelele, uma udinga usizo kuhlale kunezindlela zokuxhumana, kepha umsebenzi owenziwe kabi mhlawumbe udale okuvelayo okubi kokuqala. Uma ungafuni ukuzikhipha wena lokho kukuwe, ungambona njengohlelo ongenamsebenzi ongazi ukuthi wenzani noma lowo osendleleni yokuba ngumqambi wohlelo oncomekayo, futhi lokho kwenzeka kuphela ngokuzijwayeza futhi ngokuqinisekile nezimbungulu endleleni. Ngibe nephutha kaningi ngaphambi kokuthola isimo sami sonjiniyela ku-Gentoo, futhi lokho akuzange kungivimbe ekuzameni yize "kunesikhathi esibi" 🙂.
Kungakanani kwasekuqaleni ukuba wuhlelo namuhla?
-Akukhona okwangempela, kuyisidingo namuhla, cabanga nje ngokulandelayo, eminyakeni engama-20 noma engama-30 eyedlule, ukuthayipha bekuyisidingo, imisebenzi eminingi iqondiswe ukuthi uyazi noma okungenani ungayenza. Namuhla ukwazi iHhovisi kuyisidingo, awukho neze umsebenzi ongakubeki phambi kwemibhalo yeHhovisi. Kusasa, kungekudala, izinhlelo zizoba yisidingo. Futhi lokhu kusebenza futhi ngokombono wakho, ukwazi ukuthi kwenzekani ezinhlelweni ozibeke ezintweni ezibaluleke njengemali yakho, impilo yakho, umndeni wakho, kuyinto enengqondo kimi, ngoba ukwazi kuphela ukulinganiselwa kwabo uma wazi ukuthi bakwenza kanjani sebenza futhi ukuze ukwazi, udinga ukwazi ukuthi ungahlela kanjani.
Iziphi izinkinga engingazixazulula ezinye ezingakaxazululwa ngendlela esebenza kahle kakhulu?
-Ungamangala inani le- izici okudingekayo namuhla, futhi ukukhuluma iqiniso, akunandaba ukuthi kunabahleli bezinhlelo ezinhle kakhulu emhlabeni emphakathini, umsebenzi uyohlala njalo umkhulu kunomthamo womsebenzi wabathuthukisi, ngingakuqinisekisa lokhu eGentoo, lapho ngabantu abathuthukisa i-kernel, abantu abasebenzela i-Google, i-Sony, njll njll ... into kuphela sonke esifana ngayo ukuthi akekho umuntu onesikhathi esiningi njengoba ethanda ukukwazi ukwenza wonke umsebenzi osalindile.
Kungani kufanele ufunde ulimi oluhlelayo namuhla ngabahleli bohlelo abahle nabanolwazi esivele sikhona?
-Lokhu kuphendulwa embuzweni wesibili 😉 Kepha manje ngingeza ukuthi izizukulwane kumele zikwazi ukuxhasa umsebenzi osuvele usuthuthukisiwe, ngalokhu ngiqonde ukuthi labo onjiniyela "abanolwazi" bazonyamalala kancane kancane futhi kuzodingeka abancane »Onjiniyela bathatha imithwalo yemfanelo futhi basize ukugcina umjikelezo uphila, umphakathi ongenabo abantu abasha nabangenalwazi uthambekele ekunyamalaleni ngokuhamba kwesikhathi, ngokunembile ngoba ngeke libe khona ithuba lokudlulisa ulwazi.
Futhi yini engihlelayo?
-Lokhu mhlawumbe kuyinto enzima kakhulu ukuyiphendula, kepha ngizozama ukukunika isibonelo poco engisanda kuqala ukubhekana nezinkinga nge-GNOME 24 nokuxhumeka kwayo kwiWayland okuvimbela izinhlelo ezinjengeShutter ekuthatheni izithombe-skrini. Lokhu kuyinkinga kimi ngoba lapho ngibhala izindatshana zami, ngidinga ukukubonisa engikushoyo 🙂 ngiqalaza kancane ngize kuhlelo lokusebenza lwe-GNOME Screenshot, ngandlela thile "minimalist" ukusho okuncane. Phakathi kwemisebenzi yayo, kunokuthatha indawo yesikrini, kepha kwenzekani uma bengingasithathi kahle isithombe? Yebo, kufanele ngishiye futhi ngingene kabusha ohlelweni, into eyisicefe impela, inkinobho ethi «Phinda uyithathe» noma into enjengaleyo engivumela ukuthi ngithathe ukubamba okusha ngaphandle kokuthi ngihambe ngiphinde ngingene kungangisiza. Kuyinto encane Uhlelo lwezinhlelo, angikaze ngihlele noma yini kuhlaka lwe-GNOME ngakho-ke kusobala ukuthi kuningi engingakufunda ngaphambi kokuthumela i- "patch" yami ngenkinobho entsha, kodwa endleleni ngifunda ukuyihlela futhi ngethemba ukuthi lokhu Isici kuzoba usizo kwabangaphezu koyedwa lapho kutholakala kubo bonke.
Lesi yisibonelo, kuyinto elula nokuthi ngokuqinisekile noma yimuphi omunye umqambi "wochwepheshe" ubengakwenza vele, kepha ngenxa yokushoda kwesikhathi, bekungenjalo, manje yimina onamandla okwenza it, ngaphandle kokuthi empeleni ibe wuhlelo olukhulu.
Manje kukuwe kuphela ukuthola okuthile okungenza impilo yakho "ibe lula" kuleyo software oyisebenzisa kaninginingi, ubuhle balokho ukuthi uma silandela iseluleko engizokunikeza sona kuma-athikili alandelayo, ulimi alunandaba, ngoba Uzokwazi izisekelo ukuqala ukuqonda ikhodi oyifundayo bese uyishintsha ukuze wenze okufunayo, lokho kungumuzwa okhetheke kakhulu 🙂
Ukubingelela nokubonga futhi
Ngicabanga ukuthi kuphela uma sengivule uhlelo lwe-gnome captures, into elula kunazo zonke ukuya kuzinqamuleli zekhibhodi bese unikeza izinhlanganisela ezintathu zokuphrinta ukuthatha konke ukuphrinta kwe-alt ukuthatha iwindi elisebenzayo nokuphrinta okuphezulu ukwenza ukukhetha kusuka ekubanjweni esifundeni, izinqamuleli ezitholakalayo zilapha, kumane nje kuyindaba yokubabela
Kungakho sikunikeza isibonelo 🙂 ngoba izinto ezincane ezifana naleyo nkinobho zihlela, zingasiza abanye njengoba bengaziwa abanye, kepha ngokuqinisekile bahlangabezana nenhloso enkulu, basize ukufunda ukwenza uhlelo, futhi banikeze izindlela ezintsha, Ngemuva kwaleyo nkinobho izinto eziningi zingaqalwa, njengokuphathwa kweseshini, noma isikrini sokubuka kuqala sazo zonke izithombe ezithathiwe, noma ngamafuphi, izinto eziningi ezingenziwa. Umqondo ngukuthi uthola okuthile okukwenza weqe ilukuluku lakho, noma iyiphi isoftware esebenza kusistimu yakho ingadinga ukwenziwa ngcono noma izici ezintsha ngenxa yokushoda kwesikhathi noma izisebenzi ezingakaqaliswa okwamanje
Ngiyabonga. izimpendulo ezinhle kakhulu.
Yebo, kumuntu ongeke abe nguchwepheshe emkhakheni, kungadingeka ukubona ukuthi basebenza kumiphi imvelo, kokubili imisebenzi yokuphatha kanye nemiyalo kungaba mnandi ukwazi, isibonelo, iPython / Basic futhi wazi ukuthi kanjani ukuhlela ama-macros kumaphakheji wehhovisi afana neLibreOffice noma i-MS Office. Kunezikhathi lapho lokhu kungonga amahora amaningi omsebenzi kuwe noma kwabanye abasebenzi abakuzungezile bese ubacela ukuthi benze noma yimuphi umsebenzi ophindaphindiwe, ungakha ideshibhodi yokubala ngokushesha ama-ratios amakhulu enkampani ngemuva kokuxhuma kwi-database yayo futhi yenza umbuzo othile we-SQL.
Njengakho konke, uma uwazi amathuluzi asesandleni sakho ungacabanga ukuthi ungazuza kanjani kakhulu kuwo. Akuyona yonke into eyenziwe.
UGuillermo, uvumelana ngokuphelele nawe, "Akuyona yonke into esunguliwe" futhi okusunguliwe kungaguqulwa. Kufanele uthole okuningi kumathuluzi futhi usebenzise lelo elizifanela kahle izidingo zakho.
Okokuhlela, ulimi lokuqala ukufundwa isiNgisi, bese lolo olubaheha kakhulu futhi olubonakala luhle kakhulu kubo.
Bengingasibhalanga, kepha kuyiqiniso 🙂 ukwazi isiNgisi kusiza kakhulu ngoba izilimi eziningi zibhalwe kuso, kepha futhi ngoba inani elikhulu lolwazi lokuqala ngesandla futhi Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana
URuben Salgado kusho
I-athikili enhle kakhulu, ngaphezu kokukhuthaza.
Phendula uRuben Salgado
Nginomusa kakhulu, ngiyabonga kakhulu 🙂 Sanibonani
Ukuhlela ukukwazi ukucabanga nokuhumusha lokho kucabanga kube yimiyalo.
Ukucaciswa okubili ngalesi sihloko:
1) Ngokuya ngesipiliyoni sami njengothisha wezinhlelo cishe iminyaka eyi-10, akunandaba ukuthi ufunda luphi ulimi, kepha ukuthi ufunda kanjani nokuthi luyinkimbinkimbi kanjani.
Ngicabanga ukuthi ulimi olungafundwa ngendlela ehlelekile, bese luya kwezinye izinto eziyinkimbinkimbi, kulula kunokuqala ngolimi olufana neJava kwasekuqaleni.
Kulula ukufunda okuthile okufana ne-Hello World ku-C noma ePascal njengesisekelo, kunemigqa embalwa (UHLELO esimweni sikaPascal, noma #include Endabeni ka-C) ungaqala ukuthuthukisa i-algorithm bese ubhala lolu hlelo ngomqondo walo ngqo, njengakwiJava, yona ngokwayo edinga isigaba, indlela, nezinye izinto okokuqalwa kuzo ulwazi olugcwalisa ulwazi olungadingekile, futhi lokho kungahle kunganakwa futhi kudlulele kwezinye izinto, kepha kuyimiqondo ekhona, futhi ngombono wami, ukubheka izinto akuyona indlela enhle yokufunda, ikakhulukazi uma ulimi lukuphoqa ukuthi uzisebenzise. Kufana nokuqala umkhuba wokuqondiswa okokuqala nge-M-16, nokudubula izinyanga kumodi yokuzenzekelayo ebambe isibambo ngezandla zombili njengesibhamu.
2) Ukuthi ulimi luhunyushiwe noma luhlanganisiwe kuncike ekusebenzeni kwalo, hhayi olimini uqobo. Isibonelo, uma kusetshenziswa iPython, kuhlelo lokusebenza lewebhu elisebenzisa i-wsgi (noma i-mod_wsgi ku-apache, noma i-uwsgi yeNginx), ikhodi ye-python iyahlanganiswa lapho kuqala imodyuli ehambisanayo, ikhiqiza amafayela we-.pyc
Kukhona futhi ama-generator efayela kanambambili weJava (akhiqiza amabinari wendabuko esikhundleni se-bytecode), noma abahlanganisi bemibhalo ye-php kuma-binaries amsulwa.
Ngokuphathelene nabakushoyo nge-PHP, kumane nje kungulimi olwakhiwe kwenye inkathi, kunezinye izinto engqondweni, futhi ngaphandle kokubheka izici ezazingekho ngaleso sikhathi. Ngokusobala iqiniso lokuthi isetshenziswa kakhulu alikwenzi kube ngcono kunanoma yini emhlabeni, kepha kukhona okungokoqobo: wulimi olunamathuba amaningi okuthola umsebenzi kulo lonke uhlelo. Ukwazi ukuthi akulimazi, noma ngabe awukuthandi.
Noma bengisebenza njengoMphathi weSistimu iminyaka eminingana futhi ngashiya umsebenzi wonjiniyela, kaningi kufanele ngibeke ikhodi ye-PHP kokuthile.
Sawubona Gonzalo, ngiyabonga ngokwabelana,
Impela ukukhuluma ngemininingwane eminingi engadingekile, ukwazi ukuthi ulimi olufanayo lungahunyushwa noma luhlanganiswe yinto engadingeki okwamanje 🙂 Impela ukwenziwa kubalulekile, kepha uma sithi kuleli zinga, asivezi okungaphezulu kokudideka. Ngendlela efanayo, izingqinamba zezinhlelo eziqondiswe entweni azidingidwanga, noma eminye imiqondo okufanele yehliswe kancane kancane ukuze ingenzi abantu babe nesiyezi.
Njengoba isikhala sinqunyelwe, inhloso enkulu yalokhu okuthunyelwe ukukhombisa abafundi abafisa ukuhlelela ukuthi kukhona imihlaba emibili yezilimi, ukuthi "ngokwesiko" okuhunyushiwe "kulula", ukuthi "ngokwesiko" okuhlanganisiwe kuthe xaxa "okuyinkimbinkimbi" kepha ukuthi kufanele lelo zinga lobunzima ukuba nokuqonda okuqinile nokuthi kukumuntu ngamunye ukukhetha ulimi, ngoba ngokuya ngendlela yohlelo, bazokwazi ukukhetha amaphrojekthi abawathandayo nase ngasikhathi sinye bazokwazi ukuqonda abakufundayo kanye / noma abakubhalayo
Ngiyabonga kakhulu futhi, imikhonzo.
Leli iphutha, azikho izilimi ezihlanganisiwe noma ezihunyushiwe, kukhona abahumushi nabahlanganisi bolimi ngalunye, womabili amacala ahlukene.
Akukhona ukulayishwa ngokweqile kolwazi ukusho manje, kuyiphutha ukwenza isitatimende esinjalo. Ngokubona kwami, bekungakhiqiza kakhulu ukungabanaki otolika uma ungafuni ukugcwala ngolwazi.
Ngibonga ukucaciselwa, ngizokucubungula lapho ngibuyela odabeni. Jabulela
Yiluphi ulimi oluncoma ohlangothini lweseva ucabanga ukuthi i-php ayithandeki?
Okufanayo kwemininingwane, angazi ukuthi kuzoba nokuthile okungcono futhi kwesimanje kune-mySQL.
I-PHP ayithandeki ... Zonke izilimi zinomjikelezo wazo wempilo, futhi i-php ngokuqinisekile selivele lulimi olungena esikalini "sokuvuthwa", olwenza lube usizo ezingeni lebhizinisi, lapho ukuzinza kungaphezu kwakho konke ... Njengamabhange athile lapho isathuthukiswa khona eJava, okuvuthiwe kakhulu kune-php futhi ngokuqinisekile inabalandeli bayo nabahlambalazi ... Futhi ingasaphathwa i-COBOL ...
Kulezi zinsuku i-ORM (object relational mappers) ithatha amandla amakhulu maqondana nokuphathwa kwedatha ehlobene. Isuka ku-syntax ye-SQL iye ekilasini nasekuphatheni imfanelo ... Cishe zonke izilimi (uma kungezona zonke) ziphatha i-ORM ethile.
. IMongo DB ingenye yolwazi lobudlelwano ebelubaluleke impela; kepha-ke, kuyadingeka ukwazi ubuhle nobubi bayo futhi uqinisekise uma kungaba yisixazululo esihle kakhulu ngokuya ngesidingo esithile.
Ngiyethemba kuyakusiza, ukubingelela 🙂
Ngiyabonga, ngizokuhlola lokho.
Ungincoma ukuthi ngisebenze neJava kuLinux?.
Uma ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwamahhala nokuvalwa kangcono.
I-Eclipse namaNetBeans angumthombo ovulekile, anginasiqiniseko sokuthi ngabe ikhona yini enye isoftware yamahhala, nginomkhuba wokusebenzisa i-vim ngoba kwesinye isikhathi inani lekhodi lenza ukusebenzisa i-IDE yonke lihambe kancane futhi lithambekele ekwenzeni amaphutha. Sanibonani
Ukusebenza neJava kuLinux ngisebenzisa i-IntelliJ ngiyakuncoma.
I-PS, i-IntelliJ isoftware ephathelene 🙂
Abafana bayakhumbula futhi ukuthi ... Ngisebenza ebhange futhi ngiyakutshela ukuthi izilimi ezihlelayo zithatha isihlalo sangemuva ukuvumela izinqubo ze-SQL ne-Stored zihambe phambili.
Kufanele ubacabangele izinqubo ezigciniwe, kepha ngokungasebenzisi ulimi oluphathekayo phakathi kwezinjini, kokuhlangenwe nakho kwami, ngaso sonke isikhathi kumayelana nokuzigwema ngaphandle kokuthi ingekho enye indlela.